RØDE dia namoaka ny Podcast Production Studio! | Martech Zone
RØDE dia namoaka ny Podcast Production Studio!
Talata, Desambra 11, 2018 Talata, Desambra 11, 2018 Douglas Karr
Ny zavatra iray tsy hozaraiko amin'ity lahatsoratra ity dia ny vola sy ny fotoana laniko tamin'ny fividianana, fanombanana ary fanandramana fitaovana ho an'ireo podcast. Manomboka amin'ny mixer sy studio feno, mankany amin'ny studio compact izay azoko entina anaty kitapo, hatrany amin'ny mikrô USB dia azoko atao ny manoratra amin'ny alàlan'ny solosaina finday na iPhone… Andramo daholo.
Ny olana hatreto dia ny fitambaran'ny vahiny ao amin'ny studio sy lavitra. Olana iray toy izany ny nifandraisako tamin'ny mpanamboatra sasany raha te hanana olon-kafa hanangana prototype aho.
Tsy olana sarotra io, fa mitaky fakan-tsarimihetsika miovaova kely. Rehefa manana vahiny marobe ianao ankoatry ny vahininao lavitra, ny fahanginan'ny vahinin-tany lavitra dia hiteraka akon'ny feony ao an-dohan-dry zareo. Noho izany, tsy maintsy mamorona fiara fitateram-bahoaka ianao izay manilika ny feon'ny vahiny lavitra amin'ny valiny miverina any aminy. Izy io dia fantatra amin'ny hoe mix-minus.
Saingy tsy azoko atao ny misintona ny mixer azo soratana eny an-dàlana ankoatry ny fitaovana rehetra, ka dia hitako ny fomba hamoronana lamina mitovy. mampiasa bisy virtoaly amin'ny MacBook Pro. Ary mbola fanaintainana amin'ny vody ihany ny manamboatra azy.
Niova daholo izany.
Ankehitriny, izay rehetra manonofinofy hamorona podcasts manana kalitao matihanina dia ho afaka hanao izany am-pilaminana amin'ity sehatra vaovao sy matanjaka ity. Ity dia làlana vaovao miavaka ho an'ny RØDE: studio iray manontolo ho an'ny podcasters amin'ny ambaratonga tsirairay.
Nitsidika ilay mpanao horonan-tsary nataoko androany, Ablog Cinema, ary nanontany izy raha nahita ilay vaovao RØDECaster Pro - Podcast Production Studio. Ity misy topy topimaso.
Andraso… mbola misy ihany. Ity misy rundown antsipiriany:
Nieritreritra ny zava-drehetra ve i RØDE? Ny endri-javatra an-tserasera dia ahitana:
Fantsona mikrô 4: Kilasy A, fidirana mifototra amin'ny servo afaka manome herinaratra mikraoba condenser studio ary koa mikrôfona mavitrika mahazatra.
Asio fampidirana ho an'ny 3.5mm TRRS (telefaona na fitaovana), Bluetooth (telefaona na fitaovana) ary USB (ho an'ny mozika / feo na antso ho an'ny fampiharana)
Antso an-telefaona sy fampiharana - tsy misy akony (mix-minus). Amboary mora ny haavon'ny ambaratonga - tsy misy fitaovana fanampiny na fananganana mikorontana tafiditra ao.
Pads vokatry ny feo azo fandaharana: Ny valin'ny feo 8 miendrika fehezan-dalàna miisa XNUMX dia mampihetsi-po amin'ny jingles azo soratana sy vokatry ny feo.
Programmable ao amin'ny RØDECaster ™ Pro na avy amin'ny solosainao amin'ny alàlan'ny rindrambaiko.
APHEX® Exciter ™ ary Big Bottom ™fanodinana patanty ho an'io feo manankarena sy mafana io, tsy hita afa-tsy amin'ny rafitra fampielezam-peo matihanina. Ahitana dinamika marolafy multistage koa: famatrarana, famerana ary famakiana feo.
Efijery kasihina mamela ny fanaraha-maso mora foana ny toe-javatra rehetra, ao anatin'izany ny preset Equalizer ho an'ny feon-kira matihanina.
Fivoahana headphone efatra mahery vaika ary mpandahateny stereo mivoaka, samy manana fifehezana volume tsy miankina.
Mivantana mankany amin'ny microSD Card ny firaketana ho an'ny fandidiana tena feno, na amin'ny solosainao sy rindrambaiko tianao amin'ny alàlan'ny USB.
Fahaizana mivantana mivantana. Radio ony androany!
Tsy mahagaga izany! Ny fananana fantsom-peo azo programable dia hahafahako manomana mialoha ny fidirako, hivoaka ary ny doka an-tserasera mba hahafahako manoratra sy mampakatra ara-bakiteny ny fampiantranoana podcast ahy.
Ahoana ny amin'ny horonantsary mivantana?
Tombony iray hafa amin'ity singa ity ny fahaizana mampifangaro azy amin'ny rafitra toa azy Fitaovana fiantsenana. Ny vokatra stereo dia afaka mitondra ny audio amin'ny fitaovanao mifandray mivantana ary afaka mifamadika etsy sy eroa eo anelanelan'ny iPad sy ny vahininao ianao amin'ny alàlan'ny antso iPhone FaceTime na Skype!
Manana dia aho amin'ny herintaona hanoratana bebe kokoa Podcast an'ny luminaries miaraka amin'i Dell… Ary hiaraka amiko ity singa ity. Milanja mihoatra ny 6 kilao fotsiny ilay singa ka tsy dia ratsy loatra ny misavasava. Ampio mikrô, tariby ary sofina ary mety mila mila zavatra misy kodiarana aho, saingy tsy maninona.
Raha nanana fitarainana iray aho dia tsy hanao firaketana firaketana an-tserasera ilay singa. Noho izany, raha mikohaka ny vahiny raha miteny ny vahiny iray… mifikitra aminy ianao na mila ajanonao ny seho ary avereno jerena ilay fizarana, dia ampifanaraho amin'ny ampahany ny famokarana. Manantena izahay fa ny kinova amin'ny ho avy dia ahafahana manoratra firaketana maro amin'ny alàlan'ny karatra micro-SD sy output USB.
Miantsena ny RØDECaster Pro amin'ny Sweetwater
Tags: Fivarotana finday sy tablettestudio podcastmenaRØDECasterUSBUSB-C
Serivisy amin'ny Internet Amazon: Hatraiza ny AWS?
Fomba fisainana famolavolana: fampiharana ny hetsika Rose, Bud, Thorn amin'ny marketing